राजनीतिक भूगोल बलियो बनाएका राजेन्द्र लिङ्देन र धबल शमशेरको गठबन्धन, कमल थापालाई चुनौती « रिपोर्टर्स नेपाल
राजनीतिक भूगोल बलियो बनाएका राजेन्द्र लिङ्देन र धबल शमशेरको गठबन्धन, कमल थापालाई चुनौती
काठमाडौं, ९ मंसिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीति नाटकीय मोडमा पुगेको छ । आउँदो महाधिवेशनमा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देनले उम्मेदवारी दिएपछि नयाँ घटना विकास भएको हो । लिङ्देनलाई समर्थन गर्दै धबल शमशेरले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
राप्रपाभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बलियो जनाधार भएका दुई नेताले मुख्य पदमा उम्मेदवारी दिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । लिङ्देन राप्रपाबाट एकमात्र निर्वाचित सांसद हुन् । उनी झापाबाट निर्वाचित भएका हुन् । लिङ्देनको झापामा बलियो पकड छ ।
धबल शमशेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर हुन् । राप्रपाका तर्फबाट धबल शमशेर स्थानीय निकायको महत्वपूर्ण पदमा जित्नेमा पर्छन् । उनको बाँकेमा बलियो पकड छ ।
राजनीतिक भूगोल मजबुत बनाएका लिङ्देन र शमशेर मिलेर चुनाव लड्न खोज्नुले अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपति शमशेर र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीमाथि चुनौती थपिएको छ । पछिल्लो दुईवटा आमनिर्वाचनहरुमा तीनैजना पराजित भएका थिए । कमल थापा मकवानपुर, पशुपति शमशेर सिन्धुपाल्चोक र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नुवाकोटबाट चुनाव लड्दै आएका छन् । तर, तीनैजनाको राजनीतिक भूगोल मजबुत देखिदैन ।
लिङ्देन र शमशेर मिलेपछि नयाँ परिस्थिति सृजना भएको छ । अब भूगोल बलियो हुनेहरु नै राप्रपाको राजनीतिमा प्रभावशाली हुनुपर्ने मान्यताका साथ दुवैजना बढेको देखिन्छ ।